3 Day Best Trips From muBudapest By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > 3 Day Best Trips From muBudapest By Train
Chitima kufamba Austria, Train Travel Czech Republic, Chitima kufamba Hungary, Travel Europe
(Last Updated On: 06/03/2020)
Saka waita pakupedzisira mazviita. Unofanira kuisa mukati nokuda yenyu zororo kubasa, Akatenga wako Ndege matikiti uye vakananga kuna Hungary kuti zvakakodzera pazororo. Uye apo ndicho tsime zvose uye zvakanaka – shure kwezvose, Budapest ndiro guta rakanaka – urege kuzoitengesazve pachako pfupi chete yakasara vakakomba guta. Europe ndiro mukondinendi zvakanaka-kwakabatana zviuru nzira kuti chitima kufamba, uye izvi zvinosanganisira Hungary. Saka kamwe waita aona Szechenyi Thermal monument uye vainakidzwa yemafuta panguva Beer Spa, musoro muguta rimwe izvi 3 zvakanakisisa Budapest zuva nzendo nechitima.
Rail Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel. Thiri nyaya zvakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, The CHEAPEST Train Tickets Website In The World.
1. kuDebrecen, Hangari
The guta rechipiri pakukura muHungary uye anonziwo Capital of Great Hungarian Plain, raitangira muguta iri kumusha 200,000 vanhu. Historic uye yakanaka, KuDebrecen anongova 2 maawa uye 15 maminitsi kubva Budapest nechitima. pedyo Its anoita izvi rakaisvonaka kukwikwidza nokuti Budapest zuva panzendo nechitima.
The Great Church mu kuDebrecen ndiro guta racho rainyanya kukosha, uye mabasa sechiratidzo Protestantism muHungary. Panewo dzakawanda mamiziyamu kuti kushanyira, dzakadai Deri Museum, izvo dzimba vamwe zvikuru munhau zvidimbu yose Hungary.
Musakanganwa kuedza kubva zvimwe zvokudya zveko uye waini, naizvo. Kana uri munhu sommelier wechokwadi, unogona vasarudze “Bikaner”, imwe munharaunda akabudiswa waini kuti anoshandura kuti “ropa rehando”. Zvakanyorwa zvinogadzirwa muHungary, ari yakakurumbira 'Mupata Beautiful Women' nharaunda. Yum!
Kana uri feni of chafariz namabhati, KuDebrecen wakanganwirawo iwe akafukidzwa. Mune kubva tsika, the Aquaticum Spa is more like an indoor mvura Park. Yaiva yakakwirira domed sirin'i uye mavara mvura nemasiraidhi, these thermal baths are fun for the whole family.
2. Best Budapest Day Trips By Train: Vienna, Ositiriya
Nokuti ichi chinotevera panopindwa Budapest zuva yenzendo nechitima, tiri kusiya Hungary zvachose uye vakananga kuAustria, Hungary kwakaita wokumavirira muvakidzani. Guta guru Austria, Vienna iguta Vakamupfekedza uye kumusha pamusoro 2 miriyoni vagari. Kufanana zvakawanda Hungary, Vienna zvakare nhema pedyo Danube. Kusiyana guta duku, zvisinei, Vienna rakazara izere munharaunda dzakasiyana, mamiziyamu, zvinokwezva, uye mhando zvokudya.
Somunyori nomusimboti nemagariro uye nounyanzvi, it also sports a thriving coffee scene and you’ll find hundreds of cafes along its winding streets. Vienna zvakare kumusha Schonbrunn, the summer residence of the Hapsburgs and one of many grand buildings throughout the city.
Kana uri parwendo muchando, Vienna kunokosha-chemabhazi nokuda kwayo Christmas misika. misika izvi fantastical chinhu pfupi zvemashiripiti pamwe twinkling upenyu hwaAbhigairi zviedza, Hot mulled waini, uye kwoushamwari nyaradzo chikafu.
Kunyange zvazvo rwendo refu kuti zuva rwendo kubva muBudapest to chitima, pane zvakasimba mikana iripo pamwe ndirovedze mikana. Even nani, uchafarirwa. kuona imwe nyika yokuEurope kure yako bhakiti mazita.
Budapest kuna Vienna Zvitima
3. Best Budapest Day Trips By Train: Wiener Neustadt, Ositiriya
pakupedzisira, tava kuti kupinda kwedu okupedzisira, mumwe pakati kadikidiki taundi riri kumaodzanyemba Vienna. Ehe, Ndizvozvo, isu Mawedzera rimwe yeAustria zuva rwendo kuenda pasi rino. Sei ari kuti? Well nekuti Wiener Neustadt (kutsauka ane chinosetsa zita), ndiro guta raitangira inenge 50,000 vanhu, and it’s got it all in terms of things to do.
Zvayaiva 30km chete kubva Vienna uye pedyo chaizvo nomuganhu Hungarian-yeAustria ndiro akakwana Budapest zuva nzendo nechitima, Nhoroondo guta iri riri dzakazara hondo kutonga kubva umambo siyana. Pasinei hondo idzi- kana zvichida nokuda kwavo – Wiener Neustadt evolved into an important military training ground with the construction of the Maria Theresa Military Academy in the 1700s.
Kusiya kare shure, nhasi Wiener Neustadt musha mabasa akawanda akasiyana-siyana, kusanganisira zvizhinji panze musango nemapaki. Unogona kushanyira Maira Falls vamwe nakisisa musango, kana musoro Gesaeuse National Park to take in the fresh air.
The guta anewo sezvivako zhinji, mamiziyamu, namaberere vakazvitsaurira kuna pokuenzanisira nezvenhoroondo yeguta racho. Kana ichi ruzha zvose kufanana kukurebera – musafunganya. Pashure zvakazara zuva mabasa musoro Linsberg Asia Therme Spa kuti mukana zvichitonhorera pasi (kana anodziya!) uye kuzorora.
Budapest kuna Wiener Neustadt
Vienna kuna Wiener Neustadt
Prague kuna Wiener Neustadt
bhonasi Topic: Prague
The Czech guta iri zvishoma kure nokuda Budapest zuva nzendo nechitima asi guta rino harisi uchashayikwa. Ndizvo kana uchida nhoroondo, akitekicha, chikafu, uye zvinwiwa. Nepo kwava 8 maawa nechitima kubva muBudapest, kana uri vakananga iyi nzira chinhu chakanaka pfungwa kuti kufamba Via Vienna (unoziva, kuti guta rinoshamisa isu ambotaurwa).
Kazhinji chipa uye azere nezvivakwa akare, tsime-akachengetedzwa Ages sikweya, uye munyika dangwe uchishandisa Astronomical Clock, Prague kunokosha-ita uri European pazororo. Tora anononoka pano uye vanakidzwe famba mhiri Charles Bridge, kuvakwa muna 1402. Kana kunyange nani, put on your finest royal uniform and head to Vysehrad for the day to check out the ancient ruins of the former castle.
Budapest zuva panzendo nechitima uye Budapest iguta hunoshamisa kushanya. Kubva ayo boulevards akanaka ayo yakakurumbira chafariz dzokugezera, guta haasi kupotsa. Asi kuita pachako nyasha uye musoro ose neapo kuongorora zvimwe zvikuru yomunharaunda mashiripiti woga. Ungave uri sipping ropa vamwe chenzombe waini kana kurovha kure kune imwe itsva nyika zvachose, kutoona pazororo yako.
Imwe yenzira kuita Budapest zuva nzendo nechitima – nakidzwa nyore uye kuchengeteka aifamba nechitima uye kushandisa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “3 Best Budapest Day Trips By Train” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-budapest-day-trips-train/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / Ave kuti / von kana / kes uye mimwe mitauro.
chitima kufamba, Chitima kufamba France, Travel Europe
10 Most Streets Beautiful In Europe
chitima kufamba, Chitima pakufamba Belgium, Chitima kufamba Denmark, Chitima kufamba France, Chitima kufamba Germany, Chitima kufamba Italy, Chitima kufamba Scotland, Chitima kufamba Spain, Chitima kufamba UK, Travel Europe